Akaderedza mudyandigere uye mitemo yayo kuurayiwa
Mutemo, State uye mutemo
Neb mudyandigere - ndiwo mukana kuenda kuzororo pashure kusvika zera akaisa pamberi wava. Havasi vagari vose Russia vari nomazvo panyaya iyi. Munyaya ino tichashandisa kukubatsira kuona kana iwe zvinopinda muchikwata vanhu vanogona regera dzapfuura, uyewo nezvamai chii vanoda kuti gwaro iri.
Ndianiko angaverenga pamusoro zvaunoda mudyandigere?
Mhinduro yomubvunzo uyu ine matambudziko kwazvo ruzhinji. Full pamazita vanobatsirwa anogona kuwanikwa nguva dzose muna Mudyandigere Fund. Ndipo uchifanira kushandisa Muzviitiko, kana uri mubvunzo nezvekodzero dzako. Heino pfupi mazita vagari vari kuwana zvaunoda mudyandigere:
vashandi hunokuvadza kugadzirwa (achawira muchikwata ichi avo vaishanda izvi mamiriro kwemakore anenge gumi);
Vashandi of Far North uye paChernobyl;
vashandi pamwe mupfungwa kunokonzerwa;
vagari vane vabereki vakaremara;
vashandi nzvimbo yevasungwa;
Vagari ounyanzvi hwokugadzira okusika.
ounyanzvi hwokugadzira zvose izvi vane inokanganisa basa uye utano. Saka, kana ukaona pazvinhu izvi, ipapo iwe kodzero zvaunoda mudyandigere - musi makore 5-13 mberi nguva.
A yoga chinhu kucherechedza ndechokuti mangwanani regera vanekodzero uye avo vagari vari pre-mudyandigere zera vave adzingwa mabasa avo kana dzakaiswa kure. Muchiitiko chino, vanofanira kushandisa kuti basa centre kuti vakumbire kutsvaka. Kana 7 mukati mazuva matsva nzvimbo hakusi, unogona nyore kuita kubva bepa rokuchengeta zvakakodzera zororo.
Kwakaderedza vashandi mudyandigere utano, vadzidzisi nevamwe vanhu vanotaurwa pamazita, rinowanika wemauto hwaro. Unofanira kureva mudyandigere Fund muguta yaaigara, apo unenge muchikuvadza imwe kadhi chairo. Ikoko unogona kuwana gurupu magwaro. It panofanira kuva pasipoti, mudyandigere kadhi uye basa bhuku. Zvawanyora hazvirevi kwakasiyana izvo zvakakodzera processing zvatinosiita pamudyandigere, chete vaisanganisa nokuda zvokurapa zvitupa kana uchapupu basa ngozi runyararo.
Kutanga kunyoresa kunodikanwa kwemwedzi miviri vasati kusvika mudyandigere zera. Sezvaunogona kuramba kushanda panguva ino. Usakanganwa kuti kana zvaunoda pensions achaparadzwa rakapa - zvichaita hazvo kusiya hurongwa. Izvi zvakasiyana mangwanani kubva kubasa. Unogona kuvazve kuwana basa pamutemo. Kana, somuenzaniso, chakagadzirwa kubva pane zvaunoda pensions vadzidzisi, zviri kuwanikwa uchava kushanda chete chete vanhu pasina Clearance.
Maererano mitemo kuti mudyandigere nokuda naka pabonde chinopa imwe nuance. Kana mukadzi achiramba zororo pachine, kureva pamberi nzvimbo 55 makore, ipapo zvichanzi mhosva chirango. Iye achava 0.5% kubva mudyandigere kubhadhara imwe mwedzi. Saka kuchapedza kusvikira mukadzi kusvika yakakodzera zera.
YeParamende rokudzora Russian Federation
Article 76 of Labor Code, kana mushandirwi vanosungirwa misa mushandi pabasa?
Inotonga kuti iwane pasipoti yeEU
Definition of anotonga mamiriro: nokukurumidza zvinhu
The chikuru basa FCS. Izvi uye zvakawanda pamusoro tsika basa
Coat of maoko Uglich: mapikicha, tsananguro, nhoroondo
Kunze Ob: Mabiko
Ko iwe kudana plesieroorde pamusoro Krasnodar nharaunda jecha mahombekombe
Yemastic keke vaisona: kubika nzira
Varna dzinoyevedza. tsananguro
Inopofumadza nemaoko avo - danho nedanho gwaro
Zvinhu zvakasikwa: mienzaniso. Zvinhu zvipenyu nezvisiri zvipenyu hunhu
Sei bhokisi kunokuvadza uye zvokuita
Magadzirirwo motokari chiedza mumhanzi kugadzirwa?
Paulownia (huni): tsananguro, hanya, kurimwa, mvura uye wongororo
Ecology Krasnodar Krai: Matambudziko
"Na-Na" boka: asingazive naye?
Honey nemapopoma. Honey Waterfalls - uchityaira? Honey Waterfalls - Map